The Square: ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအနှံ့အပြားမှ အကောင်းဆုံး အစားအစာများ။
နိုင်ငံတကာနဲ့ အာရှဒေသ အရသာ အကောင်းဆုံးဟင်းလျာများ၊ ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်နေသည်များကို LIVE ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ cooking station များ၊ စားချင်စဖွယ် ဘူဖေးအလျှံအပယ်၊ala carte မီနူးအစုံအလင်၊ ကမ္ဘာတစ်လွှားမှ ဟင်းလျာအရသာအမျိုးမျိုး၊ ပင်လယ်စာအမျိုးမျိုးနှင့် ကျွန်တော်တို့၏ နာမည်ကျော်ကြားလှသော တနင်္ဂနွေ မနက်လည်စာ စသဖြင့် တစ်နေ့တာလုံး စုံလင်စွာ ရရှိသုံးဆောင်နိုင်တဲ့ The Square ကနေ ကြိုဆိုပါတယ်။
The Square က သက်ဝင်တက်ကြွပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ နေရာပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် မိသားစုဝင်တွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်လည်း ပျော်စရာကောင်းပြီး အမှတ်တရတွေ အတွေ့အကြုံတွေ ဖန်တီးနိုင်မှာပါ။
ဒါ့အပြင် လတ်ဆတ်သန့်ရှင်းတဲ့ ဒေသတွင်း၊ နိုင်ငံတကာနဲ့ အာရှဒေသ ဟင်းလျာအစားအစာ ရွေးချယ်စရာ အမျိုးမျိုးကို ရရှိနိုင်ပြီး နွေးထွေးပျူငှာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သွားလာရ လွယ်ကူအဆင်ပြေတဲ့ နေရာမှာ တည်ရှိတာကြောင့် အရမ်းကိုစိတ်တိုင်းကျပြီး တန်တယ်လို့ခံစားရစေမယ့် The Square ပါပဲ။ ကလေးများ ခံတွင်းတွေ့စေမယ့် အထူးစပါယ်ရှယ် Kids’s Menu အပြင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနှင့် သတ်သတ်လွတ်သမားများ အတွက်လည်း ရွေးချယ်စရာများ ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် အသက်အရွယ်မရွေး အားလုံးအတွက် စိတ်ကျေနပ်စေပြီး ပျော်ရွှင်စေမယ့် dining experience ကို ရရှိစေမှာ သေချာပါတယ်။
နံနက်စာ (မနက် ၆း၀၀ မှ ၁၀း၃၀) Currently Not available
နေ့လည်စာ (နေ့လည် ၁၂း၀၀ မှ ၂း၃၀ ၊ တနင်္ဂနွေနေ့မှလွဲ၍) Currently Not available
ညစာ (ညနေ ၆း၀၀ မှ ၁၀း၃၀) Currently Not available
ဗုဒဟူးနေ့တိုင်း – ကမ္ဘာ့ဈေးပွဲတော် (ညနေ ၆း၀၀ မှ ၁၀း0၀ ထိ) Currently Not available
သောကြာနေ့တိုင်း – ပင်လယ်စာစားပွဲတော် (ညနေ ၆း၀၀ မှ ၁၀း0၀ ထိ)
တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း – (နေ့လည် ၁၂း၀၀ မှ ညနေ ၃း၀၀)
အခုပဲဘွတ်ကင်တင်လိုက်ပါ – H9045-FB3@accor.com / +95 94 44 08 8883
We will, we will, WOK YOU! Grilling means good times, good friends, and great food. Who will not want all those in your daily life! Grilling, broiling, barbecuing -...
Buffets are not just about eating our favorite food, it's also about getting our money's worth - and so many of us throng to the seafood section the moment we grab our plates....
Yearning for Roasted Duck and crispy Pork Belly and can’t eat out? Your Roasted Duck & Pork Belly combo is HERE specially prepared by our Chefs. Catering for as...
COME3PAY 2, THINGYAN SEMI BUFFET To celebrate the Myanmar New Year, the Square restaurant offers with welcoming Thingyan Lunch Buffet promotion local treasure. Please...